सिक्का पैसा लिन मान्दैनन् बैंकहरु - हिमाल दैनिक
१८ भाद्र २०७६, बुधबार १३:२३
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सिक्का पैसा लिन छाडेपछि व्यापारी तथा स्थानीयहरु समस्यामा पर्न थालेका छन् । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि चलनचल्तीमा ल्याइएको सिक्का पैसाको अस्तित्व हराउँदै जाने सम्भावना देखिन थालेको छ ।
एक व्यापारी ईश्वरीप्रसाद ज्ञवालीले आफूसँग छ/सात हजार सिक्का पैसा रहे पनि बैंकहरुले साट्न नमानेपछि त्यसै राख्नु परेको बाध्यता सुनाए। “ग्राहकले एक/दुई रुपैयाँ सिक्का पैसा दिन्छन्, नलिउँ भन्नु पनि भएन”, ज्ञवालीले भने, “एक/दुई रुपैयाँ थुपार्दाथुपार्दै अहिले छ/सात हजार सिक्का पैसा छ । त्यो पैसा न त बंैकले लिन्छ न त ग्राहकले लिन मान्छन् ।”
स्थानीय व्यापारी नन्दसिंह विश्वकर्माले ग्राहकबाटै लिएको सिक्का पैसा सङ्कलन गर्दा चार/पाँच हजार रहेको बताउँदै बैंकहरुले नलिने भएपछि त्यो पैसा के गर्ने भन्नेमै अन्योलमा भएको बताए । “मसँंग चार/पाँच हजार सिक्का पैसा छ, दुई रुपैयाँको सलाई किन्दा सिक्का नै दिन्छन्, पाँच रुपैया दिँदा तीन रुपैयाँ सिक्का नै दिनुपर्छ तर बैंकले त्यही सिक्का चलाउँदैनन्”, व्यापारी विश्वकर्माले भने, “बैंकले सिक्का पैसा साट्दैन भने ग्राहकबाट हामीले कसरी लिने ? लिएर पनि के गर्ने ? नचल्ने हो भने बन्द गर्नु प¥योे नभए ग्राहकको पैसा साटनु प¥यो ।”
“अहिलेसम्म हामीलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नै छैन, यो एकदमै नौलो कुरा हो”, कायममुकायम प्रमुख पोखरेले भने, “बजारमा प्रशस्तै सिक्का पैसा छ । त्यो सिक्का पैसा बैंकहरुले साट्नुपर्छ ।”रासस
Prevपछिल्लोमन्त्री योगेशले बसाल्दैछन् राजनीतिमा नयाँ संस्कार, अरुको मानमै सम्मान आर्जन गर्दै
अघिल्लोरेल चढ्ने रहर अझै अन्योलमाNext